रुकुम घट,नाका घा,इते भन्छन्– ‘तीन,तिर घेरा हालेर कु,ट्दै भे,रीमा ध,केले’! प्र ह रीले सिट्टी बजाएजस्तो गरेर हेरेरमात्रै बस्यो’ – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/रुकुम घट,नाका घा,इते भन्छन्– ‘तीन,तिर घेरा हालेर कु,ट्दै भे,रीमा ध,केले’! प्र ह रीले सिट्टी बजाएजस्तो गरेर हेरेरमात्रै बस्यो’
नवराजकै अगुवाइमा १८ जना युवाको टोली शनिबार दिउँसो १२ बजे रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–१ सोतीतर्फ हिँड्यो, जहाँ नवराजकी प्रे मिका थिइन् ।
नवराजको टोली साँझ करिब ५ बजेतिर केटीको घरभन्दा करिब ३० मिटर टाढाको दुरीमा पुग्यो । खड्काका अनुसार उनको परिवारका सदस्यले युवाहरु गाउँमा आएको थाहा पाइसकेका रहेछन् । केटीकी आमा प्रकाशी मल्लले ‘यो डुम किन आयो, अस्तिको चोटले पुगेनछ’ भन्दै गा लीगलौज गर्न थालिन् । ‘ठूल्ठूलो स्वरमा गाली गर्न थालेपछि हामीहरु केही नबोली तलतिर फर्कियौं,’ खड्काले भने, ‘नवराजलाई पनि अब केटी लिन स किँदैन, घर फर्किऔं भनेर मनायौं ।’ टोलीले करिब १० मिनेट टाढाको नाउला भन्ने ठाउँमा पुगेर एउटा घरमा पानी मागेर पिउन थाल्यो ।
खड्काका अनुसार त्यहाँ रहेका अपरिचित व्यक्तिले ‘बाबुहरु बस्नुस्, काफल खानुहोस्’ भनेर अलमल्याए । यो व्यबहार ष,ड्यन्त्र हुनसक्ने आकलनसहित टोली हतारहतार मध्यपहाडी लोकमार्गतिर लाग्यो । तर, पाँच मिनेटमै ए,क्कासी ५०/६० जनाको समूह आएर ढुं,गामुढा गर्न थाल्यो । ‘हामीहरु जीउ जोगाउन भाग्दाभाग्दै गाउँलेले चारैतिरबाट घेरा हालेर ढुं,गा, हँ,सिया र चि,रपटले हान्न थाले,’ उनले क,हालीलाग्लो क्षण सम्झिँदै भने, ‘हामीहरु ज्यान जोगाउन भागाभाग गर्न थाल्यौं ।’
युवाको समूहले नवराजलाई नचिनिने गरी लगेको थियो । तर, आ,क्रमणको तारो उनै बने । सोती गाउँदेखि आधा घण्टा टाढाको भेरी नदीसम्म लखेटेर नवराजको ह,त्या गरिएको अर्का युवा इन्द्रजंग शाहले बताए । उनका अनुसार गाउँलेले युवाको समूहलाई भेरी किनारतर्फ बाहेक अन्य,त्र जान नपाउने गरी घेरा हालेका थिए । ‘हामीलाई बचाउनुस्, माफ पाऊँ भनेर हात जोड्दासमेत छो,डेनन्,’ उनले भने, ‘भूईँमा ल,डाएर अ,न्धाधुन्द कु,ट्न थाले ।’ त्यसपछि को साथी नदीमा हाम फाले र को साथी पुल तरे भन्ने याद पनि नभएको उनले बताए ।
ज्या,न जोगाउन भेरीमा हाम फालेकालाई पनि नदीमै पुगेर ढुंगा, हँसिया र चि,रपटले प्र,हार गरेका उनको भनाइ छ । अर्का युवा सरोज भँडेलले पनि कुट,पिटबाट बच्न भेरीमा हाम फालेको बताए । नदी पार गरेपछि युवाहरुले थप कु,टपिट गरेपछि प्र,हरीले प,क्राउ गरेर लिएको उनले बताए ।
घ,टना भइरहँदा करिब ६ बजेतिर प्र,हरीको टोली पनि पुगेको थियो । तर, ‘बचाऊ बचाऊ’ भन्दै गुहार्दा पनि वा,स्ता नगरेका पी,डित युवाले बताए । प्रहरीले सिटी बजाउँदै मान्छेलाई धपाएजस्तो गरेको खड्काले बताए । उनले यस्तो अवस्थामा ‘म,रे पनि मरिन्छ’ भन्दै नदीमा हाम फालेको बताए । उनी पौडी खेलेर वारि (जाजरकोट) पट्टि पुगे पनि आक्र,मणबाट ब,चेनन् । ‘गाउँका केटाहरुले यतै आएर कु,टपिट गरे,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रह,री आएर मलाई लगेर गयो ।’ चौरजहारी अस्पतालमा दुई दिन उपचार गरेपछि सोमबार घर फर्किएको उनले बताए ।
यतिविघ्न भइसक्दा साँझको करिब ६ बजेको थियो । ज्या,न जोगाएका १२ जना युवालाई गाउँलेको सहयोगमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । टोलीमा सहभागी युवा शाह अन्य ६ जनालाई गाउँलेले कुटपिट गर्दै ग,म्भीर घा,इते बनाएर भेरीमा धकेलेको बताउँछन् । ‘बेहोस हुने गरी कुटिएपछि साथीहरुले नदीमा पौडी खेल्न सक्ने कुरा पनि भएन,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उनीहरुको हालत के भयो भन्ने त सबैले अनुमान लगाउन सक्छ ।’
भेरीमा बे,पत्ता भएका ६ जनामध्ये ३ जनाको शव नदी किनारमा भेटिएको छ । भेरी नगरपालिका–४ का नवराजसहित सोही ठाउँका गणेश बुढा र पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–१ का टीकाराम सुनारको शब फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । अन्य तीनजनाको खोजी कार्य जारी रहेको जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डीएसपी किशोरकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बेप,त्ता हुनेमा भेरी नगरपालिका–११ का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र वडा नं. ४ का सन्दीप विक रहेका छन् ।
१२ जनावि,रुद्ध किटानी जाहेरी
घ,टनामा संलग्न भएको भन्दै जाजरकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा १२ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ । १७ वर्षीया केटी, उनका बुवा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल, चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्य,क्ष डम्बरबहादुर मल्ल र सोही गाउँका डिल्ली मल्ल, सन्तोष मल्ल, तुलबहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, रमेश मल्ललगायत १२ जनाविरु,द्ध किटानी जहोरी दर्ता भएको जाजरकोटका डीएसपी किशोरकुमार श्रेष्ठले बताए । घटनामा संग्लग्न सबैलाई पश्चिम रुकुम प्र,हरीले निय,न्त्रणमा लिइसकेको उनको भनाइ छ ।
‘पीडित परिवारका सदस्यले घटनाको अनुसन्धान जाजरकोट प्रहरीले गर्नुपर्ने र यहिँको अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने माग गरेर शबको पो,ष्टमार्टम गर्न मानेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तर घ,टना रुकुम पश्चिममा भएकोले के गर्ने भन्नेबारे हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।’
भारतमा प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला दहन ‘माफी नमागे भारतबाट सबै नेपालीलाई लखेट्ने’